गिर्खा कसरी स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित छ? :: Setopati
गिर्खा कसरी स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित छ?
डा. बिनोद ढकाल चैत १८
सायदै शरीरमा यस्तो कुनै स्थान हुन्छ जहाँ गिर्खा नआओस्। गिर्खाका लागि शिर, पाउ, नितम्भ, पेट कुनै ठाउँ अछुतो छैनन्।
शरीरमा गिर्खाको उपस्थिति व्यक्ति स्वयंलाई थाहा नहुन सक्छ। शरीरका बाहिर भागमा मात्र नभएर शरीर भित्रका अंग प्रत्यांगमा पनि गिर्खाहरु आउन सक्छन्। त्यसमाथि कोठीहरु त प्रायः मानिसहरुमा हुन्छन्।
कोठी कालो, खैरो, रातो, निलो, गुलाबी रंगका हुन सक्छन्। शरीरमा पाइने साना ठूला गिर्खाले मानिसलाई असजिलो महशुस गराउन सक्छ।
नराम्रो गिर्खाले शरीरलाई हानी गरेर असजिलो त गर्छ गर्छ तर त्यती हानी नगर्ने गिर्खाले पनि शरीरमा देखिने ठाउँमा भएर कस्मेटिक कारणले असहज गर्न सक्छ। आफ्नो रुपमा बढी शंका हुनेहरुलाई त झन् समस्या पारेको हुन्छ।
गिर्खा सामान्यतया बिनाइन नै हुन्छन्। बिनाइन भन्नाले क्यान्सरको कमसल स्वरुप हो। क्यान्सर सामान्यतया दुई भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ। बिनाइन र म्यालिग्नेन्ट।
म्यालिग्नेन्ट भन्नाले घातक, शरीरलाई हानी गर्न सक्ने खालका भन्ने बुझिन्छ। शरीरको प्रकृतिक बनावट अत्यन्त सुन्दर छ। क्यान्सर बन्नपनि क्यान्सर कोषिकाहरुले अत्यन्त कडा मेहनत गरेका हुन्छन्।
कमसेकम सात/आठ वटा शरीरलाई सुरक्षा गर्न खटिएकाको विरुद्धमा गएर जित हासिल गर्नपर्छ उनीहरुलाई। बनिसकेपछि पनि आफू बनेको ठाउँलाई छिचोलेर अर्का ठाउँ जानुपर्छ। तबमात्र ऊ सजिलै शरीरलाई हानी गर्न सक्ने हुन्छ।
त्यसकारण सबै मानिसहरुलाई क्यान्सर हुँदैन। नत्र भए प्रत्येक मिनेट हाम्रो शरीरमा लाखौँ कोषिकाहरु क्यान्सरमा परिणत भइरहेका हुन्छन्।
महिलाहरुमा सामान्यतया गिर्खा आउने महत्वपूर्ण स्थान स्तन हो। हरेक उमेर समूहका महिलाहरुलाई स्तरमा गिर्खा आउन सक्छ। किशोरीहरुलाई कम हानिकारक गिर्खा आउनसक्छ जसमध्ये प्रायः देखिने भनेको फाइब्रोएडिनोमा (मेडिकल शब्द) हो।
यो तीस वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरुलाई आउन सक्छ। यो एक सेन्टिमिटरदेखि दश सेन्टिमिटरभन्दा ठूलो हुनसक्छ। सामान्यतया समात्न खोज्दा चिप्लिने हुनाले यसलाई स्तनको मुसा (ब्रेस्ट माउस) भन्ने गरिन्छ।
यसले सामान्यतया हानी नगर्ने भएपनि कालान्तरमा क्यान्सरमा रुपान्तरण हुन सक्ने सम्भावना भएकाले साथै कस्मेटिक कारणले पनि यो गिर्खाको अपरेसन बिरामीहरुले गर्ने गरेको पाइन्छ। सल्यक्रिया गरिसकेपछि यो गिर्खा सामान्यतया निको हुन्छ।
यस्तै उमेर समूहमा आउने स्तनको गिर्खा भनेको स्तनपान गराइरहेका महिलाहरुलाई दूध जमेर वा दुध जमेका कारणले संक्रमण भएर बन्ने गिर्खाहरु हुन्। सामान्यतया यस्ता गिर्खाहरु रातो, छाम्दा तातो, छुँदा दुख्ने खालका हुन्छन्।
यस्तो गिर्खालाई सानो सुई हालेर भएको पिप निकाली यान्टिबायोटिक औषधि खाएर उपचार गर्न सकिन्छ। अन्य अवस्थाका संक्रमणका कारणले पनि गिर्खा आउन सक्छ। संक्रमण हुँदा गिर्खा देखिन, छोपिन नसक्नुका साथै सेतो बाक्लो निप्पल स्राव हुनेपनि गर्दछ।
संक्रमण किटाणु (ब्याक्टेरिया)का कारणले हुने गर्छ। समयमै उक्त समस्याको सामाधान नभए संक्रमण स्तनभरि फैलन सक्छ। यस्तैखाले समस्या फेरि घातक क्यान्सरमा पनि देखिने कारणले कहिलेकाहीँ डाक्टरहरुलाई समेत यस्तो समस्याले झुक्काइदिने गर्छ।
यस्तै झुक्काइदिने समस्या बोसो मर्दा पनि हुन्छ जसलाई मेडिकल शब्दमा फ्याट नेक्रोसिस भन्ने गरिन्छ। फ्याट नेक्रोसिस कुनै स्तनको शल्यकृया या आघातले गर्दा हुन्छ।
उमेर ढल्कदै गइसकेपछि घातक क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। हुन त आजकाल सानै उमेरदेखि नै क्यान्सर शंका गर्नपर्ने भइसकेको छ। तीस वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरुलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कम स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना छ।
यसको कारण हाम्रोमा प्रयोग हुने विषाक्त खानपान र विकिरणको प्रभाव हुन्। आजकालका मानिसमा पाइने सचेतनाका कारण बढीभन्दा बढी महिलाहरु उपचारका लागि अस्पतालमा आउने गर्छन्।
विज्ञानले जीनमा गरेको प्रगती पनि अर्को कारण हो जसकारण हिजो पत्ता लगाउन नसकिने रोगहरु आज पत्ता लगाइने गरेका छन्। लेखकसँग १९/२० वर्ष उमेरका महिलाहरुलाई स्तन क्यान्सर भनेर प्याथोलोजी रिपोर्टमा दिएको अनुभव छ।
घातक स्तन क्यान्सर संसारभर मृत्यु हने क्यान्सरको सूचीमा फोक्सोको क्यान्सरपछि दोस्रो स्थानमा पर्छ। यसबाट प्रभावित हुनेमा ९९ प्रतिशत महिलाहरु पर्छन्। यो रोग वंशानुगत रुपमा आवरण हुने गर्छ।
आमा, दिदी बहिनीहरुलाई भएको खण्डमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। बढ्दो उमेरका, छिटो महिनावारी सुरु भएका (एघार वर्षअघि), बच्चा जन्माएका, ढिलो उमेरमा बच्चा जन्माएका, अन्य बिनाइन गिर्खा भएका, विकिरणको (एक्स रे, उपचारका क्रममा सेक्न पर्ने आदि) संक्रमणमा परेका, किटनासक औषधिको मारमा परेका, मोटोपना भएका, जाँड रक्सीको सेवन गर्ने, बाक्लो स्तनको घनत्व भएका, निस्क्रिय जीवन शैली भएका, स्तनपान नगराउने महिलाहरुलाई स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
स्तनको जाँच गर्दा स्तन सुन्निएमा, साह्रो, रातो, दुख्ने गिर्खा भएमा र गिर्खामाथिको छाला सुन्तलाका बोक्रा जस्तो भएमा (जसलाई पिउ डि ओरेन्ज भनिन्छ) क्यान्सर शंका गर्न पर्छ।
स्तन क्यान्सर भएको बिरामीको परिणाम क्यान्सरको फैलावट, आकार, प्रकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। अन्य अंगसम्म फैलिएमा, काखीको गिर्खाको आकार बढ्दै गएमा रोग बढी गम्भीर हुन्छ।
स्तरका गिर्खाहरुलाई अस्पतालमा भिडियो एक्स रे, कहिलेकाहीँ म्यामोग्राफी अनि शंकास्पद गिर्खाहरुलाई एफएनएसी (सुईको माध्यमद्वारा कोषिकाहरु निकाल्ने), र बायोप्सी (सानो गन जस्तो उपकरणले मासुको सानो चोक्टा निकाल्ने) गरेर अध्ययन गर्ने गरिन्छ।
शरीरको जाँच, रेडियोलोजी र प्याथोलोजीको (एफएनएसी र बायोप्सीको रिपोर्ट) आधारमा रोग पत्ता लगाउने काम गरिन्छ। रोग पत्तासँगै रोगको फैलावट पनि जाँच गरिन्छ।
नेपालजस्तो पुरुष प्रधान देशमा महिलाहरुमा गरिबी र अशिक्षा व्यापक भएका कारण रोग लुकाउने प्रवृत्ति हावी छ। त्यसकारण अस्पतालमा महिलाहरु रोगको अन्तिम अवस्था अर्थात् सबैतिर क्यान्सर फैलिएपछि आउने पनि गर्छन्। त्यस अवस्थामा क्यान्सरको रोगको प्रभावकारी उपचार गर्न प्रायः असम्भव हुन्छ।
सानो गिर्खा छ भने गिर्खामात्र काटेर फाल्दा हुन्छ। क्यान्सर फैलिएर कोखामा समेत गिर्खा बनाएको छ भने उक्त गिर्खा पनि फाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि पनि सेक्नपर्ने हुन सक्छ।
क्यान्सर काटेर फलिसकेपछि फालेको क्यान्सर सहितको स्तनका भाग प्याथोलोजी प्रयोगशालामा पठाइन्छ जहाँ क्यान्सरको प्रकार, आकार, तथा फैलिएको हद पत्ता लगाइन्छ। आजकाल अझ सूक्ष्म (मोलिकुलर) स्तरमा गएर क्यान्सरको प्रकार पत्ता लगाउने गरिन्छ।
जसकारण पहिलाको भन्दा बढी प्रभावकारी उपचार हुन सक्छ। उक्त सुविधा नेपालमा सीमित स्थानमा मात्र उपलब्ध छ। यहाँ नसकेर कुनै थप कुरा पत्ता लगाउन भारत पठाउने पनि गरिन्छ। त्यसकारणले पनि बिरामीहरुलाई असुविधा, पैसा र समयको बर्बादी हुने गरेको छ।
स्तनमा पाइने गिर्खा प्रायः महिलाहरुमा हुने भएपनि पुरुषहरुमा पनि यदाकदा देखिन सक्छ। जसलाई गाइनेकोमास्टिया भनिन्छ। उक्त रोग पुरुषको शरीरको इस्ट्रोजेन हर्मोन (जसले स्तरका कोषिकाहरुलाई उत्तेजित पार्छ) र एन्ड्रोजन हर्मोन (जसले उक्त कार्यको प्रतिवाद गर्छ) दुईको गडबढी भएमा हुने गर्छ।
सामान्यतया किशोरावस्थामा यो समस्या हुने गर्छ। अन्य पुरुषहरुलाई पनि सिरोसिस (कलेजोको फाइब्रोसिस) भएको अवस्थामा वा औषधि जस्तै स्टेरोइड तथा गाँजा, हिरोइन इत्यादि कुलतको प्रयोगले गर्दा हुन्छ।
यीभन्दा महत्वपूर्ण कारण अत्याधिक जाँडरक्सीको सेवन हो जसले सिरोसिस पनि गराउन सक्छ। पुरुषको स्तन बढ्नुको कारण टेस्टिसको एक प्रकारको क्यान्सरका कारणले पनि हुन सक्छ तर यो हुने सम्भावना निकै कम छ।
नेपालमा स्तन क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सरपछि सर्वाधिक बढी देखिने गर्छ। उत्तिकै मात्रामा क्यान्सरले ज्यान पनि लिने गरेको छ। त्यसैले विशेष गरेर महिलाहरु स्तनमा हुने गिर्खादेखि सजग हुन पर्छ।
हरेक महिलाले आफै बेलाबेलामा स्तन छामेर निगरानी गर्न आवश्यक छ। गिर्खा आएको अवस्थामा डाक्टरको सल्लाह सुझाव अनुसार उपचार गर्न पर्छ।
को-कसलाई कहिले स्तन क्यान्सर लाग्नसक्छ, सामान्यतया निश्चित छैन तर सावधानी अपनाएर परिमार्जन योग्य सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर, नियमित आफ्नो स्तनको जाँच गरेर यो क्यान्सरको निदान र उपचार गर्न सकिन्छ।
घातक गिर्खा आएको अवस्थामा समयमै उपचार गर्यो भने क्यान्सर पूर्णतया निको हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७, १३:५८:००